Izikhukhula zizobeka engcupheni izigidi zabantu kungakapheli iminyaka engama-25 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMonica sanchez | | Izikhukhula
Izikhukhula yizimo zezulu okuzodingeka sizijwayele. Ngokuya ngocwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-Science Advance, kungaba okulimazayo eminyakeni engama-25 ezayo ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke.
Njengoba izinga lokushisa likhuphuka, futhi ngaphandle kokuthi iMini Ice Age empeleni yenzeke, kuzoba nezinguquko emaphethini emvula emhlabeni jikelele.
Izimvula zivame ukwamukeleka, kepha uma ziwela ngamandla zingadala izinkinga eziningi, hhayi kuphela ngokuwa kwezihlahla nokuwa komhlaba, kepha zingabulala nabantu abaningi. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ukuthi iziphi izifunda ezisengozini enkulu, okungukuthi, lezo lapho kuzodingeka khona ukuthatha izinyathelo zokuzivikela. Ukuzinquma, abacwaningi balingisa izinguquko kumamodeli wesimo sezulu kanye ne-hydrological ezingeni lomhlaba elihambisana nokwanda kwezinga lokushisa, kucatshangelwa ukusatshalaliswa kwamanje kwabantu.
Ngakho-ke, babekwazi lokho iningi le-United States, Central Europe, North and West Africa, kanye ne-India ne-Indonesia zizoba phakathi kwezindawo ezithinteke kakhulu yizikhukhula eminyakeni engama-25 ezayo.
Uma kungathathwa izinyathelo ezidingekayo, izimpilo eziyizigidi zizoba sengozini enkulu. E-China kuphela, abantu abangaba yizigidi ezingama-55 bazobhekana nalezi zigameko ezibhubhisayo; futhi eNyakatho Melika bazosuka ku-100.000 wamanje baye esigidini esisodwa. Ngeshwa, futhi njengoba kwenzeka kaningi kulawa macala, amazwe asathuthuka, kanye nalezo zikhungo zasemadolobheni ezinabantu abaningi kakhulu, zizoba nezinkinga eziningi kakhulu ekuvikeleni inani labantu bazo.
Kulokhu kumele kungezwe ukuthi, noma kungancishiswa ukukhishwa kwe-carbon dioxide, okungomunye walabo ababhekele ukufudumala komhlaba, akukho okungenziwa ukuvimbela lokhu ukuthi kungenzeki.
Ngeminye imininingwane, ungakwenza chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izikhukhula » Izikhukhula zizobeka engcupheni izigidi zabantu kungakapheli iminyaka engama-25